जनवरी बर्थस्टोन - गार्नेट - रातो रंग - नयाँ अपडेट २०२१
गारनेट जान बर्थस्टोन र of्गको पुरानो र आधुनिक दुबै सूचीको अनुसार जनवरीको लागि बर्थस्टोन हो।
जनवरी बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एक जन्मस्टोन एक मणि हो जुन जनवरी महिनाको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: गारनेट। यो सुरक्षाको प्रतीक हो। यो उदाहरण को रूपमा एक यात्रा को दौरान यो पहिरन सुरक्षित राख्न सक्छ।
गारनेट, जानको बर्थस्टोन, र rain्गको सबै इन्द्रेणीमा खानी छ। को गारनेट परिवार रत्न संसारको सबैभन्दा जटिल को एक हो। यो एकल प्रजाति होइन तर धेरै प्रजाति र प्रकारहरू समावेश गर्दछ। केवल रातो पाइरोप गार्नेट जनवरी बर्थस्टोन मानिन्छ।
जनवरीको बर्थस्टोन रंग के हो?
जनवरी जन्मस्टोन कहाँ पाइन्छ?
जनवरी बर्थस्टोन गहना के हो?
जनवरी जन्मस्टोन कहाँ पाउन सकिन्छ?
जनवरी जन्मस्टोनका राशि चिन्हहरू के हुन्?
गारनेट सामान्यतया रंगको साथ सम्बन्धित छ लाल, यी रत्नहरू लगभग कुनै पनि र colorमा फेला पार्न सकिन्छ र सबै प्रकारका गहनाका लागि लोकप्रिय विकल्पहरू हुन्।
यो गाढा, गाढा, धनी रातो देखि हल्का बैजनी लाल.
लाल र orange्गको प्रकाश स्पेक्ट्रमको अन्तमा र is्ग हुन्छ, सुन्तला र विपरीत वायोलेट पछि।
पाइरोपको मूल भण्डारहरू गारनेट चेक गणराज्यको बोहेमियामा थिए। यी स्रोतहरू अधिक ऐतिहासिक छन् त्यसपछि व्यावहारिक, र थोरै सामग्री आज त्यहाँबाट आउँदछ। मुख्य पाइरोप निक्षेपहरू मोजाम्बिक, तन्जानिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, चीन, र अमेरिका (एरिजोना र उत्तर क्यारोलिना) मा छन्।
हामी गार्नेट रिंग, कंगन, झुम्का, हार र अन्य धेरै बेच्दछौं।
गारनेट रत्न गहना गहिरो र प्यारा रातो रंगको चमक दिन्छ। जनवरी को गारनेट उत्कटता, शुभकामना र प्रेरणाको संकेत हो।
त्यहाँ राम्रो छ हाम्रो पसलमा बिक्रीको लागि रातो वस्त्र
पाइरोप गारनेट भावनात्मक रूपमा चिन्ता कम गर्दछ, र रचना, साहस र धीरज। यसले समग्र मुडलाई हल्का बनाउँछ। यसले आधार र क्राउन चक्रहरूलाई सुरक्षा गर्दछ, र साथै हृदय र सन्तुलन चक्रलाई सन्तुलित गर्न सक्छ। पायरोप गार्नेटले आत्मीयता र कोमलतालाई उत्तेजित गर्दछ, स्वयंको सृजनात्मक शक्तिहरूलाई एकतामा।
मकर र कुम्भ पत्थर दुबै जन बर्थस्टोन हुन्
तपाईं मकर वा कुम्भ हो। गारनेट जनवरी १ देखि 1१ को ढु the्गा हो।
जनवरी 1 मकर गारनेट
जनवरी2मकर गारनेट
जनवरी3मकर गारनेट
जनवरी4मकर गारनेट
जनवरी5मकर गारनेट
जनवरी6मकर गारनेट
जनवरी7मकर गारनेट
जनवरी 8 मकर गारनेट
जनवरी9मकर गारनेट
जनवरी 10 मकर गारनेट
जनवरी 11 मकर गारनेट
जनवरी 12 मकर गारनेट
जनवरी 13 मकर गारनेट
जनवरी 14 मकर गारनेट
जनवरी 15 मकर गारनेट
जनवरी 16 मकर गारनेट
जनवरी 17 मकर गारनेट
जनवरी 18 मकर गारनेट
जनवरी 19 मकर गारनेट
जनवरी 20 कुंभ गारनेट
जनवरी 21 कुंभ गारनेट
जनवरी 22 कुंभ गारनेट
जनवरी 23 कुंभ गारनेट
जनवरी 24 कुंभ गारनेट
जनवरी 25 कुंभ गारनेट
जनवरी 26 कुंभ गारनेट
जनवरी 27 कुंभ गारनेट
जनवरी 28 कुंभ गारनेट
जनवरी 29 कुंभ गारनेट
जनवरी 30 कुंभ गारनेट
जनवरी 31 कुंभ गारनेट
हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक जनवरी जन्मस्टोन
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अनुकूलित जनवरी बर्थस्टोन गहना बनाउँदछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
Umbalite ०.0.91 XNUMX ct
पाइरोप गार्नेट जोडी 6.23 सीटी
Umbalite ०.1.58 XNUMX ct
पाइरोप गार्नेट 2.85 सीटी
पाइरोप गार्नेट 3.37 सीटी